I-condo ebuyekeziwe yechibi - ilungele abantu abashadile! - I-Airbnb
I-condo ebuyekeziwe yechibi - ilungele abantu abashadile!
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Jonathan
Siyakwamukela ku-Lake Retreat yethu! Le ndawo esanda kulungiswa esechibini isendaweni enhle engasemachibini i-Main Channel, eduze namanzi e-Dams chilly. Indawo enhle yenhlanzi noma yokuphumula nje ngasemanzini! Ukubukwa kwechibi okuhle njengoba uphuma emnyango! Vuka ngekhofi kuvulande & amanzi asezinyathelweni ezimbalwa nje kuphela. Jabulela ukuhamba ngezinyawo ohlangothini lwe-deck, inhlanzi, noma i-grill echibini! Ngaphakathi jabulela i-Netflix, noma vele ubheke i-R&R!
Silwela ngempela ukugcina izivakashi zethu engqondweni nasempilweni. Ngalokho okushiwo ukuthi sihlanza nge-sanitizer ngemva kwesivakashi ngasinye futhi sibuza ukuthi uphethwe yinoma yiziphi izimpawu noma uye wachayeka kunoma ngubani one-COVID- 19 ukuba ungabhukhi uze ucacise. Siyabonga ngokubekezela kwakho.
Awekho ama-trailer esikebhe avunyelwe ngaphakathi kwamasango.
Ukupaka okwabiwe kungokwemoto eyodwa sicela upake endaweni yakho owabelwe ukuze unciphise ubungozi bokudonswa. Ukupaka okwengeziwe kuyatholakala kodwa kukhawulelwe.
Leli elinye lamakamelo okulala amakhulu angu-1 i-condo yokugeza endaweni. Ikamelo lokulala linombhede omkhulu kanye nosofa omkhulu egumbini lokuphumula. Igumbi lokugezela elilodwa lineshawa/ ubhavu. Lena i-condo yezinga eliphansi ngakho azikho izitebhisi. Sinikeza i-Netflix kanye ne-WiFi ephephile kuzo zonke izivakashi. Asinayo i-cable. I-smart tv isethwe ngama-app afana ne-amazon nokuningi kodwa kufanele ungene ngemvume ku-akhawunti yakho ukuze usebenzise lezo. Ilungele abantu abangu-2 futhi itholakala emphakathini othulile onobungane nokubukwa okuhle kwe-Lakeside. Donsa esikebheni noma uphumule kwezinye zezihlalo zethu zasolwandle eceleni kwechibi. Amanzi ahlala cishe ama-degree angu-50 unyaka wonke. Ilungele ngempela ukudoba noma ukuphumula ku-raft ngezinsuku zasehlobo ezishisayo. Ebusuku lapho izimo ziba khona ungathola ithuba lokubona inkungu iphuma echibini!
4.83 · 108 okushiwo abanye